Ukuqeqeshwa Kwabasebenzi - iKing Lion Limited
1. Ukuqeqeshwa Kakho Hlela
Sinefayela lokuqeqeshwa ngokuphelele labo bonke abasebenzi, likhombisa konke okufanele abasebenzi bethu bakwazi. Yiluphi ulwazi namakhono okufanele babe nawo ukuze benze ngempumelelo imisebenzi yabo?
2. Bamba Izikhathi Zokuqeqesha Ezivamile
Siba nezikhathi zokuqeqesha abasebenzi bethu njalo. Ukuqeqeshwa njalo kungasiza ekugcineni amakhono nolwazi. Izikhathi ezijwayelekile futhi ziyindlela enhle yokufundisa amakhono athuthuke kakhulu futhi wazise abasebenzi nganoma yiziphi izinguquko.
3. Sebenzisa Abasebenzi Njengabaqeqeshi
Sisebenzisa abasebenzi abanamakhono aphezulu njengabaqeqeshi abahamba phambili.
Laba bantu yibo abaqedela imisebenzi yabo ngesikhathi nangendlela efanele. Bangaba ngabaphathi. Noma, ezinhlanganweni ezi-flat, bangahle babe ngabasebenzi abathenjiwe kakhulu.
Siyabacela ukuthi badlulisele amakhono nolwazi lwabo kwabanye abasebenzi. Bangakwazi ukuqeqesha abasebenzi abasha noma bafundise izifundo eziqhubekayo zokuqeqesha. Sizobanikeza imininingwane ejwayelekile abazoyifundisa, noma sibayeke bazenzele izinto zokuqeqesha.
Siphinde sifundise abasebenzi bethu ukwenza eminye imisebenzi ngaphakathi kwenkampani yethu. Ukuqeqeshwa kwesiphambano kungasiza abasebenzi ukuthi benze kangcono imisebenzi yabo eyinhloko. Bangathola amakhono abangawasebenzisa emisebenzini yabo. Futhi, bazi kangcono ukuthi yini abangayilindela kwabasebenza nabo kwezinye izikhundla.
5. Zibekele Imigomo Yokuqeqesha
Sibona ukuthi uhlelo lwethu lokuqeqesha luyasebenza yini. Ukuze wenze lokhu, setha izinhloso bese ulandelela ukuthi bayahlangabezana noma cha.